Alta Qualità Audemars Piguet Royal Oak Automatic Repliche Orologi - EUR 75 Repliche Rolex
Alta Qualità Audemars Piguet Royal Oak Automatic Repliche Orologi
The akara nke Alta Qualità Audemars Piguet Royal Oak Automatic Repliche Orologi selfwinding ụdị enweta ọzọ gbara ajọ dimkpa na ọhụrụ a akwụkwọ featuring-enwetụbeghị ụdị ya size. Ya ígwè ikpe ka e abawanye na a 41 mm dayameta (na mbụ 39 mm). A ya na o dịkọrọ ndụ akụkụ sina retains niile àgwà na emewo ka Royal Oak dị otú ahụ a kpara oge a na-eche nche collection. The ikpe n’etiti, ndị bezel, okpueze, na mgbaaka na ihe mpịachi mgbachi na-niile ka ígwè, dị ka ihe nlereanya na kpukwara ụwa nke Ọma watchmaking afọ 40 gara aga. The aghụghọ interplay nke satin-leghaara na-egbu maramara na-ebupụta nke na esorowo aha nke mbụ Royal Oak ese bụ dị ka on-emekarị ka mgbe, dị nnọọ ka ndị asatọ hexagonal kposara na octagonal bezel ka nọ na-acha ọcha gold, kpọmkwem otú ha dị na mbụ 1972 model. Mmiri na-eguzogide 50 mita na-onwem na a ịghasa-ekpochi okpueze, ikpe na-ruo eruo na a glareproofed sapphire crystal na caseback. The mgbaaka na seamlessly ike na ikpe na atụmatụ ndị ahụ collection si unmistakable aesthetic, ji n’ụzọ zuru okè kpọkọtara njikọ na studs mere ndokwa na-aga n’ihu n’ihu ebelata iji nke size. A ọhụrụ Audemars Piguet Mmaji Atọ-agụba mpịachi mgbachi oké a abụọ-ntukwasi-kpọgide usoro na-eme ka ọdịdị ya.
Ọzọkwa ahụkarị nke a collection, na nwa Ịkpọ oku nke a Audemars Piguet Royal Oak Automatic Repliche Orologi a “Grande Tapisserie” ụkpụrụ na now aghọ a mbinye aka maka ihe nile Royal Oak selfwinding ụdị. Nke a motif na-deere site Audemars Piguet eji akụkọ ihe mere eme na ígwè ọrụ dị ka ramolayé ma ọ bụ wakporo ịchọ mma na Usoro. Usoro a na-enyere imekotaotuugbo ọnwụ nke n’ámá interspersed na a gridwork ụkpụrụ nke ezi grooves. The superimposition nke abụọ decorations, nke bụ a pụrụ iche mma nke Royal Oak dials, endows ha na-enweghị atụ radiance. The etinyere AP mkpịrịsị pụtara dị n’elu logo na ọzọ nwekwara uche karịa na aga 39 mm version. Ha na-ahapụ ọtụtụ ihe ọnụ ụlọ 12 elekere maka a abụọ hour-welara n’ike mmụọ nsọ nke mbụ Royal Oak nche ulo oru na 1972.
Ọhụrụ a Audemars Piguet Royal Oak Repliche Orologi Selfwinding 41 mm gafere ka n’afọ iri na ụma nke Audemars Piguet Calibre 3120, a n’ibu selfwinding ije-akwọ ụgbọala hour, nkeji na sekọnd aka nakwa dị ka a window-ụdị ụbọchị ngosi. 280-akụkụ Calibre 3120 nwere a 60-hour ike idobere na a ugboro ole nke 21.600 vibrations / hour (3 Hz). The monobloc oscillating arọ ka nke 22-carat gold.
A kwesịrị ụmụ nke mmadụ mbụ ugwu sports nche, ọhụrụ a Audemars Piguet Repliche Orologi Selfwinding nlereanya na a 41 mm dayameta na-abịa na abụọ ndị ọzọ na ígwè na nsụgharị na a-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ọlaọcha-toned Ịkpọ oku. Nlereanya a na-dịnụ na pink gold na a họọrọ nke nwa ma ọ bụ ọlaọcha-toned Ịkpọ oku, ruo eruo na a pink gold mgbaaka ma ọ bụ a na akpụkpọ anụ eriri na AP mpịachi mgbachi.
Tag:Alta Qualità Audemars Piguet Royal Oak Automatic Repliche Orologi, Audemars Piguet Repliche Orologi, Audemars Piguet Royal Oak Automatic Repliche Orologi, Audemars Piguet Royal Oak Repliche Orologi
41mm audemars piguet royal oak automatica repliche orologi
Repliche Audemars Piguet Bianco Negozio Automatico Orologio Online
Alta qualità Audemars Piguet Royal Oak Repliche Orologi